Voina teto an-drenivohitra :: Olona enina matin’ny lozam-pifamoivoizana tao anatin’ny iray volana • AoRaha
Voina teto an-drenivohitra Olona enina matin’ny lozam-pifamoivoizana tao anatin’ny iray volana
Nanomboka ny faramparan’ny volana janoary hatramin’ny fiandohan’ity volana marsa ity dia fantatra fa olona enina no namoy ny ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana niseho teto Antananarivo renivohitra, araka ny tatitra avy amin’ny Pôlisim-pirenena. Am-polony maro ireo naratra. Misy ihany koa ny loza niteraka fahasimban-javatra.
Ny pôlisy ao amin’ny Borigady misahana ny lozam-pifamoivoizana (BAC), etsy Tsaralalàna, no mandray an-tanana ny fanadihadiana rehetra momba ny lozam-pifamoivoizana miseho eto an-drenivohitra, mialoha ny hitondrana ny raharaha eny amin’ny Fitsarana. Tsy mbola nahazoana tatitra milaza ny isan’ireo olona naiditra am-ponja vonjimaika kosa ny tompon’andraikita eo anivon’ny Pôlisim-pirenena.
Raha ny fanampim-baovao kosa dia olona iray no nindaosin’ny fahafatesana niharan’ny lozam-pifamoivoizana tamina tranga niseho tao anatin’ny efatra ambin’ny folo andro (ny 28 janoary hatramin’ny 10 febroary lasa teo). Trangana loza dimy ambin’ny folo niteraka faharatrana olona fito ambin’ny folo no voaray, nandritra io tapa-bolana io. Tranga valo hafa nisy fahasimbana ara-materialy no noraisin’ny pôlisy an-tanana sy nanaovana fizahana.
Tsy nisy fisavan’ny pôlisy
Ny tapa-bolana manaraka kosa (tamin’ny 18 febroary hatramin’ny 3 marsa 2019), izay fotoana nampiato ny fisavana nataon’ny pôlisy, dia fantatra fa olona dimy no namoy ny ainy tamina lozam-pifamoivoizana niseho teto an-drenivohitra ihany. Nisy tranga efatra amby roapolo voaray nahitana faharatrana olona roa amby dimampolo. Loza dimy hafa niteraka fahasimban-javatra.
Araka ireo tarehimarika voaray avy tamin’ny Pôlisim-pirenena ireo, dia nitombo ny lozam-pifamoivoizana niseho teto an-drenivohitra, nandritra ny fotoana tsy nisian’ny fisavana nataon’ny pôlisy. Efa miverina, tamin’ity herinandro ity, io fisavana ataon’ny mpitandro filaminana io na ny «Police de la route». Voalaza fa tsy mbola namerina izany ny avy eo anivon’ny Pôlisim-pirenena.
«Mbola manaraka fiofanana manokana hanatevenana ny fahaiza-manao ny pôlisy misahana ny fifamoivoizana eto Antananarivo renivohitra, mandritra ny efatra andro. Hita ao amin’ny fiofanana, ohatra, ny fampahatsiahivana ireo andraikitry ny pôlisy misahana ny fifamoivoizana, ny fandalinana ny fitsipika mifehy ny fifamoivoizana ary ny fanentanana amin’ny ady atao amin’ny kolikoly », araka ny fanazavana avy amin’ny Pôlisim-pirenena ihany.
Fifamoivoizana any Ambatondrazaka :: Mitaky ny hamerenana ny sakana amin’ny RN 44 ny mpitatitra